Good Newwz (2019) | MM Movie Store
အားလုံးကို သတငျးကောငျးလေး ပေးခငျြပါတယျ။ ကြူပျတို့ ဖကျက အာမခံနိုငျတာတဈခုကတော့ သတငျးကောငျးပါပဲဒါက ဂြိုရှီဆေးရုံရဲ့ ကွျောငွာ၊ နစေ့ဉျ ကလေးမရတတျတဲ့ ဇနီးမောငျနှံတို့ရဲ့ အားထားရတဲ့ နရော။
ကလေးလိုခငျြပမေဲ့ မရတတျကွတဲ့ ဗာရှနျတို့ ဗတ်တရားလငျမယားမှာ ညီမနဲ့ယောကျဖရဲ့လမျးညှနျခကျြကွောငျ့ ဒီဆေးရုံကို ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီမှာပဲ ဗာရှနျတို့ လငျမယားနဲ့ ဟနျနီးတို့ လငျမယားကို တှဆေုံ့ဖို့ ဖွဈလာပါတယျ။သူတို့က နာမညျအဖြားတှေ တူနကွေတယျ။
နှဈတှဲလုံးက ဗတ်တရားတှေ၊ ဒီလိုနဲ့ ဆရာဝနျက ပွောလိုကျပါတယျ။ကြူပျတို့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံရငျ့ကကျြလှတဲ့ ပညာရှငျတှဟော သုကျနှဈစုံကို နာမညျတူနတေော့ ရောထှေးမိသှားပါတယျတဲ့။ကဲ အဲ့ဒီမှာ ဇာတျလမျးက စပွီ။
ဟနျနီးရဲ့ သုကျက ဒီးပျတီးဆီ ရောကျသှားပွီး ဗာရှနျရဲ့ သုကျက မိုနီကားဆီ မှားပွီး ရောကျသှားပွီလို့ သိလိုကျရတဲ့ အခါမှာတော့…..ကဲ ကိုယျ့လူတို့…. ဟာသကားကောငျး နာမညျကွီး တဈကားမို့ လကျမလှတျတမျးကွညျ့သငျ့ပါတယျဆိုတာ မပွောလညျး သိကွမယျမဟုတျလား။
ဒီကားမှာ ခငျဗြားတို့တှေ ခှီလညျးခှီရမယျ မကျြရညျလညျးကရြမယျဆိုတာ ရဲရဲကွီးအာမခံပါတယျပေးရတဲ့အခြိနျနဲ့တနျတဲ့ အိန်ဒိယကားကောငျးတဈကားကွညျ့ခငျြရငျတော့ လကျမနှေးဘဲ အပွေးသာဒေါငျးလိုကျကွပါတော့IMDbမှာတော့ 7.6/10 အထိရထားပွီး ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတို့ရဲ့ ပွောငျမွောကျလှတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကေို ခံစားကွညျ့ရှူကွပါဦးဗြာ။
အားလုံးကို သတင်းကောင်းလေး ပေးချင်ပါတယ်။ ကျူပ်တို့ ဖက်က အာမခံနိုင်တာတစ်ခုကတော့ သတင်းကောင်းပါပဲဒါက ဂျိုရှီဆေးရုံရဲ့ ကြော်ငြာ၊ နေ့စဉ် ကလေးမရတတ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတို့ရဲ့ အားထားရတဲ့ နေရာ။
ကလေးလိုချင်ပေမဲ့ မရတတ်ကြတဲ့ ဗာရွန်တို့ ဗတ္တရားလင်မယားမှာ ညီမနဲ့ယောက်ဖရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကြောင့် ဒီဆေးရုံကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ ဗာရွန်တို့ လင်မယားနဲ့ ဟန်နီးတို့ လင်မယားကို တွေ့ဆုံဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့က နာမည်အဖျားတွေ တူနေကြတယ်။
နှစ်တွဲလုံးက ဗတ္တရားတွေ၊ ဒီလိုနဲ့ ဆရာဝန်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျူပ်တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လှတဲ့ ပညာရှင်တွေဟာ သုက်နှစ်စုံကို နာမည်တူနေတော့ ရောထွေးမိသွားပါတယ်တဲ့။ကဲ အဲ့ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းက စပြီ။
ဟန်နီးရဲ့ သုက်က ဒီးပ်တီးဆီ ရောက်သွားပြီး ဗာရွန်ရဲ့ သုက်က မိုနီကားဆီ မှားပြီး ရောက်သွားပြီလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အခါမှာတော့…..ကဲ ကိုယ့်လူတို့…. ဟာသကားကောင်း နာမည်ကြီး တစ်ကားမို့ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်ဆိုတာ မပြောလည်း သိကြမယ်မဟုတ်လား။
ဒီကားမှာ ခင်ဗျားတို့တွေ ခွီလည်းခွီရမယ် မျက်ရည်လည်းကျရမယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်ပေးရတဲ့အချိန်နဲ့တန်တဲ့ အိန္ဒိယကားကောင်းတစ်ကားကြည့်ချင်ရင်တော့ လက်မနှေးဘဲ အပြေးသာဒေါင်းလိုက်ကြပါတော့IMDbမှာတော့ 7.6/10 အထိရထားပြီး ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တို့ရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို ခံစားကြည့်ရှူကြပါဦးဗျာ။